विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना बिनाका स्थानीय तह, बिस करोड भन्दा बढी क्षति « News of Nepal
आठविसकोट नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोले अत्यधिक क्षति पुगेको छ । आठविसकोट नगरपालिका ९, १०, ११ र १२ स्थित गिजागारखोलामा आएको बाढीले खोला किनारका तीनवटा घरहरु सहित पाँचवटा घट्टहरु समेत बगाएको छ । उक्त खोलाको बहाव बढेपछि आठविसकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडिको वालहरु खोलाले बगाउँदा कार्यालय समेत जोखिममा परेको छ । कार्यालय जोखिममा परेपछि छेउतिरको हलमा रहेका महत्वपूर्ण कागजातहरु, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका उपकरणहरु र फर्निचर सामाग्री अर्को भवनमा सारिएको छ । कार्यालयसँगै रहेका ३ वटा घरहरु उच्च जोखिममा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यालयदेखि तलपट्टीको तारजाली समेत बगाईदिएपछि सामान सुरक्षित गर्न अन्यत्र सारिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । खोलाको बहाव कार्यालयतिर आउन नदिन स्काभेटरले छेक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताउनुभयो । यही खोलाकै छेउमा विद्युत नगर भत्किएपछि सो क्षेत्रको विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ । ठूलो पानी पर्दा खहरे खोला एक्कासी बढ्ने भएकोले नसोचेको क्षति भोग्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय लक्ष्मण शाहले बताउनुभयो । सडक निर्माण गर्दा वातावरणलाई ध्यान नदिएर जथाभावी डोजर लगाएपछि गाउँगाउँमा पहिरोको मात्रा बढेको उहाँको भनाई छ । यस्तै आठविसकोट नगरपालिका –११ धुर्सेनीमा गएको पहिरोले दुई घर बगाएको छ । दुईवटा घर भत्किएपनि पुरै गाउँ जोखिममा रहेको छ । पहिरोका साथै पानीको मुहान फुटेपछि धुर्सेनी गाउँ थप जोखिममा परेको छ । पहिरोले आठविसकोटका मुख्य सडकहरु नदुवा–राडी र रिम्ना–राडी सडक समेत अवरुद्ध भएको छ ।
आठविसकोट नगरपालिका –११ का १६ घर परिवार घरबारविहिन भएका छन् । धुर्सेनी सहित गोइरी र मंगराका घरबारविहीन ती १६ घरपरिवारलाई नगरपालिकाले ५ हजारका दरले राहतसमेत वितरण गरेको छ । यसका साथै वडा नम्वर ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ वडाका मुख्य बस्तीहरु उच्च जोखिममा परेको नगरपालिकाले जनाएको छ । गिँजागाड खोला, वडा नं. ७ र ८को बीचमा पर्ने खारखारा खोला र ठूलीभेरी नदी छेउछाउमा उच्च जोखिम रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य स्थानिय तह भन्दा आठबिसकोटले बिपद व्यवस्थापन योजना बनाएको भएपनि बर्षात सुरु भइ प्रकोप भइसकेपछि बाहिर आएको हो । तर व्यवस्थित योजना अझै भइसकेको छैन । अहिलेसम्म बाढी र पहिरोका कारण चार करोडको क्षति गरेको छ । गत असार देखी भदौ ९ गतेसम्म नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी र पहिरोका कारण चार करोडको क्षति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विशेष गरेर नगरपालिका वडा नं. ११ को मंग्राह गाउँ पूर्ण रुपमा विस्तापित भएको छ । यस्तै वडा नं. ९ को गिजागाड खोला, वडा नं. ६ को ठुलीभेरी नदीका कारण तल्लुबगर, वडा नं. १२ को तातोपानी खोलाका कारण स्थानीयको घरबास नै पूर्णरुपमा क्षति गरेको केसीले जानकारी दिनुभयो । बाढी र पहिरोका कारण अहिलेसम्म ३२ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको र एक सय ३८ विस्थापित भएको नगरपालिकाको तथ्याङ्क रहेको छ । पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका र विस्तापित भएकाहरुलाई अहिले आफन्तको र सार्वजनिक खाली ठाउँमा राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाई छ । बाढी पहिरो पिडितलाई नगरपालिकाले प्रति परिवार पाँच हजारका दरले नगद राहात सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै १० हजार बराबरको जस्ता पाता र पाँच हजार बराबरको खाद्यन्न सामाग्रीको समेत सहयोग गरिएको केसीले बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका स्थानीयको घरबास नै पहिरोले बगाएका कारण उनिहरुलाई सानो सहयोगले नपुग्ने भएकाले आवश्यक राहात सहयोगका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत केन्द्रमा माग गरिएको छ ।
घरबासका साथै उनिहरुको अन्नबाली उत्पादन गर्ने जग्गा समेत पहिरोले बगाएका कारण थप समस्या भएको छ । बस्ने घरबास नै पहिरोले बगाएपछि स्थानीयहरुलाई दैनिक सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । आफुहरुलाई साँझ विहानको छाक टार्न समस्या उत्पन्न भएको नगरपालिका–११ का पहिरो पिडित दत्तबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । ‘घर पहरोले बगाएपछि अहिले त्रिपालमुनीको बास भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेकुरा समेत घरसंगै पहिरोले बगाएपछि साँझ बिहानको छाक टार्न पनि समस्या भइरहेको छ ।’
यो खोलामा बाढी आएको बेला गाडी वारपार गर्न नसकेर घण्टौं जाम हुने गर्दछन् । सडकको बैकल्पीक उपाय नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । पुल बन्ने चर्चा बर्षाैं अगाडी देखी भएपनि कुनै पहल नहुँदा स्थानीयले हरेक बर्ष बर्षा याममा यही खोलामा सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १२ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर ओलीले आफुहरुको पहल जारी रहेको बताउनुभएको छ । वडाले नगरपालिकालाई दवाव दिइरहेको र नगरपालिकाले पनि सडक बिभागलाई पटक पटक दवाब दिएको उहाँले बताउनुभयो । सडक बिभागलाई तत्काल काम गर्नका लागी अनुरोध गर्दा सडक बिभागले सर्भे गरिएको जानकारी दिएको बताइएको छ । तर काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सडक डिभिजन चौरजहारीका प्रमुख आसिस थापाले गत जेठ महिनाको अन्तिममा डिजाइन स्विकृत भइसकेको बताउनुभयो । असार महिनामा आर्थिक बर्ष सकिने भएकोले टेन्डर निकाल्न नसिकएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अव यो आर्थिक बर्षमा टेन्डर निकालेर निर्माणमा जाने डिई थापाको भनाई छ । यो आर्थिक बर्षमा सबै काम सम्पन्न नभएपनि कामलाई तिब्रता दिइने ताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले यस बर्ष २०,६५२,५०० (बिस करोड, पैंसट्ठी लाख दुई हजार पाँच सय) को क्षति भएको बताएको छ । जस अनुसार ४० लाख ४ हजार राहत बितरण भइसकेको छ । यस्तै आठबिसकोट नगरपालिकाको मात्र ३१ घर परिवारलाई प्रति घर परिवार ५० हजारको दरले राहत बितरण भएको गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहतको लागी केन्द्रमा अनुरोध गरेको जनाएको छ । आठबिसकोट नगरपालिकामा सबै भन्दा बढी क्षति भएको र थप राहतका लागी केन्द्रमा माग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।